Budata Transcriber APK maka Android
Free Budata maka Android (16.00 MB)
Transcriber bụ ngwa gam akporo efu nke ị nwere ike iji nyefee ozi olu WhatsApp/ndekọ ụda ekesara gị. Ọ bụrụ na ịnụrụ mkparịta ụka ogologo oge nke ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị na WhatsApp na-agwụ ike, ị kwesịrị ịnwale ngwa Transcriber, nke nwere ike ịtụgharị ozi olu ka ọ bụrụ ozi ederede.
Etu esi atụgharị ozi olu WhatsApp WhatsApp
WhatsApp anaghị enye ike ịgbanwe ozi olu ka ọ bụrụ ederede. Ịkwesịrị ịwụnye ngwa ọzọ iji nata ndekọ olu site na kọntaktị gị nụdị ederede kama ige ntị ozugbo. Transcriber maka WhatsApp na ụlọ ahịa Google Play bụ otu nime ngwa kachasị mma ị nwere ike iji maka nke a.
Mgbe ị wụnye ngwa, ị mepee WhatsApp wee họrọ ozi olu ịchọrọ ịtụgharị. Ị na -ezipu ozi olu site na iji atụmatụ Ekekọrịta ya na ngwa Transcriber. Mgbe ijiri ngwa a na nke izizi, a na -arịọ ikike ịnweta ebe nchekwa ekwentị. Onye na -akpọ oku maka WhatsApp na -ebugo faịlụ ọdịyo na igwe ojii na -enweghị nhazi na ịgụ ọdịnaya nke ozi olu.
Họrọ ozi olu ozi nke ị naghị ege.
Jiri atụmatụ nkekọrịta WhatsApp wee tụọ ya onye ntụgharị okwu.
Hapụ ngwa iji nweta ebe nchekwa nime ama ama gị.
Ị nwere ike ịlele ọdịnaya nke ozi olu nụdị ederede. Mgbe nhazi, ị nwere ike ịlele ọdịnaya dị mkpa nihuenyo. Ị nwere ike idetuo ederede atụgharịrị ma ọ bụ kesaa ya na ngwa ọzọ. Enwere ike ibupu ederede atụgharịrị dịka ederede doro anya, PDF, RTF, HTML, SYN, NVivo Transcript na F4 transcription.
Nha faịlụ: 16.00 MB
Mmepụta: PhD Researches